Born Again – Gold Channel Movies
Episode 1+2 Apr. 20, 2020
Episode 3+4 Apr. 21, 2020
Episode 5+6 Apr. 27, 2020
Episode 7+8 Apr. 28, 2020
Episode 9+10 May. 04, 2020
Episode 11+12 May. 05, 2020
Episode 13+14 May. 11, 2020
Episode 15+16 May. 12, 2020
Episode 17+18 May. 18, 2020
Episode 19+20 May. 19, 2020
Episode 21+22 May. 25, 2020
Episode 23+24 May. 26, 2020
Episode 25+26 Jun. 01, 2020
Episode 27+28 Jun. 02, 2020
Episode 29+30 Jun. 08, 2020
Episode 31+32 Jun. 09, 2020
တစ်ဘဝတည်းတောင် စိတ်ဝင်စားအောင်ရိုက်ကူးတဲ့ကိုရီးယားကားတွေက ဒီလောက်ကြည့်ကောင်းတာ။ နှစ်ဘဝ ဇာတ်လမ်းဆိုတော့ ဘယ်လိုတွေ စိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်မလဲမသိ။
Mystery/Romance အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ ဒီကားမှာ
စုံထောက်ရယ်၊ စုံထောက်ရဲ့ချစ်သူနဲ့ စုံထောက်ရဲ့ ချစ်သူကိုမှ ချစ်မိသွားတဲ့ ကွင်းဆက်လူသတ်သမားရယ် သူတို့ရဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင် ဇာတ်လမ်းပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃၂ နှစ် ၁၉၈၀ ခုနှစ်တုန်းက မင်းသား Kong Ji-Cheol (Chang Ki-Yong) က ဆိုးသွမ်းလွန်းတဲ့ ဖခင်လိုဖြစ်မလာအောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိန်းကျောင်းနိုင်ခဲ့သူတစ်ယောက်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ ဆေးကျောင်းသား Cheon Jong-Beom (Chang Ki-Yong) အဖြစ် ပြန်လည်မွေးဖွားလာခဲ့ပါတယ်။
၁၉၈၀ ခုနှစ်တုန်းက မင်းသမီး Jung Ha-Eun (Jin Se-Yun) က Old Future ဆိုတဲ့ စာအုပ်အဟောင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ပါ ။ ၁၉၈၀ ခုနှစ်တုန်းကတော့ နှလုံးရောဂါ ခံစားနေရသူဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ဒီနေ့ ခေတ်ကာလမှာတော့ ရှေးဟောင်းသုတေသန နည်းပြတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
၁၉၈၀ ခုနှစ်တုန်းက မင်းသား Cha Hyeong-Bin (Lee Soo-Hyuk) က စုံထောက်တစ်ယောက်ပါ။ ဒီနေ့ခေတ်ကာလမှာတော့ ပြစ်မှုတွေရဲ့ သက်သေတွေကို မျိုးရိုးဗီဇနဲ့မှယုံကြည်လက်ခံတတ်တဲ့ ခပ်မိုက်မိုက် အစိုးရရှေ့နေတစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့…
၁၉၈၀ ခုနှစ်တွေတုန်းက သူတို့ဘယ်လိုတွေ ဆုံစည်းခဲ့သလဲ။
ဘယ်လိုအငြိုးတွေနဲ့ သေဆုံးသွားခဲ့လဲ။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ​ရော လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုတွေကြားက ဘယ်လို Romance တွေနဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်ဖြစ်မလဲ။ နှစ်ဘဝစာ ရေစက်တွေက ဘယ်လိုများဆက်နွယ်နေမလဲ။
၃၂ နှစ်ကွာခြားသွားပြီး Character နှစ်မျိုးစီနဲ့ ခေတ်နှစ်ခေတ်ကို အပြိုင်မြင်တွေ့ခံစားရဦးမယ့် Born Again ဇာတ်လမ်းက အပိုင်း ၃၂ အထိ ရှိမှာဖြစ်ပြီး ဧပြီလ ၂၀ ရက်​နေ့မှာ KBS2 ရုပ်သံလိုင်းကနေ တနင်္လာ အင်္ဂါ​နေ့တိုင်း ထုတ်လွှင့်ပြသသွားမှာပါ။
Ko Naing GyiMay 15, 2020Reply
15+16 က ဇာတ်သိမ်းပိုင်းလားခင်ဗျာ
gcmoviesMay 15, 2020Reply
thazinMay 26, 2020Reply
thazinJune 11, 2020Reply